Archive du 20200128
Mpitondra sy mpanohitra Mifampitandroka amina resaka dosie
Mifampitandroka amin'ny resaka dosie ambara fa maloto ny mpanao politika. Havoakanay fa nitory an-dRavatomanga sy Rajoelina tamin'ny fanondranana boaderozy i Profesora Zafy Albert,
Vahaolana atolotry ny fanjakana Mivaona amin’ny filàn’ny oniversitem-panjakana
Manodidina ny 60.000 eo isan-taona ny isan’ireo tanora afaka bakalorea eto Madagasikara.
Kaominina Antananarivo Renivohitra 50 miliara ariary hatokana amin’ny fampiasam-bola
Nisokatra omaly tamin’ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany natrehan’ny mpanolotsain’ny tanàna eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).
Fanendrena minisitra Farafahatarany amin’ny zoma izao
Efa nametraka ny filoha Rajoelina fa tsy maintsy hosoloina ny mpikambana ao anatin’ny governemanta.
Voina mahazo ny mpiray tanindrazana Nitondra am-bavaka ny firenena ny mpanao gazety
Nanatanteraka fotoam-pivavahana ho an’ny firenena tetsy amin’ny Katedraly FJKM Analakely ny mpanao gazety omaly talata 27 janoary maraina noho ny voina mahazo ny Malagasy mpiray tanindrazana.
Fanampiana avy any Dubaï Mba avelao hiditra eto ilay « Boeing 747 », hoy i Ny Rado
Nanapa-kevitra ny hampiditra fanampiana milanja 100 taonina (tente, kits Station eau potable, kits fahandroana sakafo, akanjo, sakafo, vovo-dronono, fanafody,... )
Fikambanana FFAM sy ny baolina kitra Tafatsangana ny ekipa « Foot-ball Force Anosizato Miray »
Vina 3 no tandrovan’ny fikambanana FFAM (Force Feminine d’Aide Mutuelle) tahaka ny anakandriamaso eo amin’ny sehatra fanatanjahantena. Anisan’ny lehibe indrindra amin’izany ny fitaizana ny tanora mba ho olom-banona.
Nicolas Dupuis sy Faneva Ima Nitondra fanampiana ho an’ny traboina
Tonga nanatitra fanampiana teny amin’ny BNGRC ny mpanazatra ny ekipam-pirenena Malagasy eo amin’ny taranja baolina kitra Nicolas Dupuis sy ny vadiny omaly.
Fahombiazana tanteraka no azo, hoy ny filohan’ny FMA « Fedesiona Malagasin’ny taranja Atletisma », Andriamahazo Norolalao, teny
Rugby - Ampahefa-dalan’ny Elite Federal 2 Lavo avokoa ireo ekipan’ny Faritany roa
Tontosa tamin’ny alahady 26 janoary 2020 teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka sy tany amin’ny kianja monispalin’i Toamasina ny
Fifanakalozana ara-barotra Mpanjifa mampidi-bola be an’i Maorisy i Madagasikara
Mihamafy hatrany ny fifandraisan’i Maorisy sy i Madagasikara eo amin’ny lafiny ara-toekarena.
Rabetsara Lita “Ajanony aloha ny fanoloana mpikambana ao amin’ny governemanta”
Miondrika manoloana ireo namoy ny ainy ary mankahery ny fianakaviana sy ny niharam-boina noho ny toetr’andro ratsy Rabetsara Lita, filohan’ny fikambanana miaro ny zon’ny mpanjifa. T
Sosialim-bahoaka Tsy voafehy ny vidim-piainana
Efa nambara ombieny ombieny fa ny fomba fiasa nandritra ny herintaona dia nihazakazaka ny fananganana fotodrafitrasa tetsy sy teroa.
Efa-bolana tsy nianatra Nidina an-dalambe ny mpianatry ny pôliteky
Leo ny tsy fianarana mandritra ny fotoana maharitra ireo mpianatra eny amin’ny pôliteknika Vontovorona.
Mpivarotra amoron-dalana Misy tena tsy manara-dalàna no mbola mandoto tanàna
Tahaka izao hitantsika amin’ny sary izao ny fako avelan ireo mpivarotra amoron-dalana sy anaty arabe eto Antananarivo renivohitra isan’andro.
Ben’ny tanànan’Ankadimanga “Afindrao any an-toeran-kafa ny Tanamasoandro”
Tena tsy hankasitrahan’ny vahoakan’Ankadimanga ilay tetikasa tanamasoandro kasain’ny fitondram-panjakana hanotofana tany
Fantson-drano lo sy simba Raikitra amin’izay ny fanoloana azy
Hiroso amin’ny fanoloana ireo fantsona lo, mahatonga fahaverezan’ny rano betsaka eto Antananarivo ny JIRAMA.
Votsotra tampoka ilay alika Olona enina voakaikitra
Olona miisa 6 no indray nahita faisana tamin’ny kaikitry ny alika tany amin’ny distrikan’i Midongy Atsimo ny faran’ny herinandro teo.
Tany Alaotra ny governemanta Manomboka anio ny fanarenana ny RN44
32 maty, 10 tsy hita popoka, 116 675 ny traboina, 14 103 ny trano dibo-drano, 1517 ny simba, ary olona 16 030 ireo voatery nafindra toerana.
EPP Maibahoaka Ivato Nahazo boky sy Clé USB maromaro
Notoloran’ny orinasam-pifandraisana Orange Madagascar fitaovana ny EPP eny Maibahoaka, Ivato.
Fanendahana teny 67 Ha Tratra niaraka tamin'ny mpitondra fivavahana ireo jiolahy
Lehilahy miisa roa no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny CSP7 teny amin’ny faritra Jesosy Mamonjy 67ha ny talata 21 janoary 2020 teo tokony ho tamin’ny 5 ora hariva noho ny antony fanendahana.
AMBATONDRAZAKA Manarina fotodrafitrasa ny Miaramila
Taorian’ny rotsak’orana mahery vaika tany amin’ny faritra Alaotra Mangoro, niezaka nanampy ireo mponina amin’ny fanamboarana ny lalana ny miaramila.
Ampefiloha Ambodirano Saika matin’ny olona ilay mpanendaka
Lehilahy iray, 25 taona, monina eny Ampefiloha ambodirano, no nosamborin’ny polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP7, 67ha ny zoma 24 janoary 2020 teny amin’ny faritra manodidina ny ABC School
Miaramila naratra tany Miandrivazo Tsy misy ahiana ny ain’ilay nentina eny Soavinandriana
Araka ny fampitam-baovao azo dia avotra soamantsara ary tsy misy ahiana ny ain’ilay miaramila iray voatifitra naiditra hopitaly eny Soavinandriana.